Shwe Nya War Sayadaw: December 2012
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂
အစိုးရက နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲရာမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ သံဃာတော်များကို တိုက်ရိုက်ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုတွင် အစုိုးရမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ၀န်ခံပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ရဟန်းရှင်လူများ လုံးဝ သက်သာပျောက်ကင်းအောင်အထိ အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူ ကုသမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ပေးရန် လက်ရှိတွင်ပင် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည်ဟု ရွှေည၀ါဆရာတော်က မိုးမခသို့ မိန့်ကြားသည်။
ထိုအရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကို ရပ်ဆိုင်းသင့်ပြီး၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်သော၊ အမိန့်ပေးစေခိုင်းသော လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၊ တာဝန်ခံများကို ယခုချက်ခြင်းပင် တာဝန်မှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ဒေသခံပြည်သူတို့အတွက် လုံခြုံ အေးချမ်းမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အကာအကွယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ သဘောထားကို ပြောကြားသည်။
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က တရားဥပဒေနှင့်အညီ၊ ခေတ်နှင့် စနစ်နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်အချိန်အတွင်း နိုင်ငံတော်က လက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစုိုးရတရပ်အနေဖြင့် ၎င်းလုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာစက်အတွင်းမှ တိုက်ရိုက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ၊ တိုက်ရိုက် ကျုးလွန်သူများအပေါ် တာဝန်ယူမှု အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ပြသရမည်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်ကြားသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လက်ခံရရှိသော ကူညီမှုအလှူများအနက် ရွှေည၀ါဆရာတော်ထံ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသော သံဃာတော်များအား Australia နိုင်ငံမှ ဒကာ ၊ ဒကာမများ ထောက်ပံ့လှုဒါန်းသော အလှုတော်ငွေ စာရင်း မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ။
1: Sayadaw Dr Dhammacara Au$ 100.00
2: U Thaung Shwe and Daw Khin Aye Au$ 200.00
3: Ko Kyaw Hlaing and Ma Aye Aye Myaing Au$ 330.00 (Au$30.00 transfer fee)
Total Au$ 630.00
Thai Baht 18,528.00 (တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ငါးရာ နှစ်ဆယ်ရှစ် ဘတ် လက်ခံရရှိပါသည်
နတ်လူ သာဓု ခေါ်စေသောဝ်
ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များ အတွက် ဆက်သွယ်လှုဒါန်းလိုပါက အောက်ပါ ဘဏ် အကောင့် ကို ထည့်သွင်းလှုဒါန်းနိုင်ပါသည် ။
Branch Name : HOSPITAL
Swift Code : BKKBTHBK.
Account Name : MR somkid seengan
Account No. 8767013801
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်ကြီး ဖုန်းနံပါတ် : +66(0)905494281
Facebook :ven suriya
Facebook : Kha Kha Tun
Skype : vensuriya09
Skype : shwen.yawar
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏ အလှူများ လက်ခံရရှိကြောင်း
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်လှုဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ ပြုသော ထိုင်းနိုင်ငံ နေရာ အသီးသီးမှ တရားပွဲ (ဓမ္မပူဇာ) အလှုရှင်များ ဆရာတော်ထံ ကိုယ်တိုင် လာလှုသော အလှုရှင်များ စာရင်းမှာ ---------
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်သည် ပြည်ပ၌ ဆေးကုသနေသော ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏ အား ထောက်ပံ့ရုံသာ မကဘဲ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရရှိ၍ မန္တလေး - မုံရွာ ဆေးရုံ တို့ မှ ရွှေ့ပြောင်းကာ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ဆေးကုသနေသော သံဃာ (၄)ပါး အတွက် တစ်ပါးလျှင် (၁)သိန်း ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၄)သိန်း တိတိကို (19.12.12) နေ့စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီး မှ တဆင့် လှုဒါန်းကြောင်း ကြားသိရပါသည် ။
BANGKOK BANK... BANGKOK...HOSPITAL.... BKKBTHBK.
MR.SOMKID SEENGAN.. 8767013801....
Posted by Maung Yit at 2:13 PM No comments:
Donation Towards Injured Monks from Letpadaung Crackdown
ကြေနီတောင်၌ဒဏ်ရာရသော သံဃာတော်များလှူဒါန်းအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ဘဏ်နံပါတ်နှင့် အကောင့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Maung Yit at 1:33 PM No comments:
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂
လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ စေတနာ နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ စီစဉ်မှုဖြင့်၊ ၀ပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ညနေ ၇ နာရီ ခွဲမှ ၉ နာရီ ခွဲအထိ မြန်မာပြည်က ရွှေည၀ါဆရာတော် တရားဟောမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင် ဆန္ဒပြပွဲအရေးအခင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ရဟန်းသံဃာတော်များ ဆေးဝါးကုသရန် ရည်ရွယ်ဟောပြောမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
Posted by Maung Yit at 1:53 PM No comments:
Labels: Dhamma Talk, Invitation
လက်ပံတောင်းတောင် ထိခိုက်သံဃာများအတွက် အများပြည်သူ၏...
Donation Towards Injured Monks from Letpadaung Cra...
လက်ပံတောင်းတောင် သံဃာတော်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှော...